Geesse Yaroon Ishee Yaroon Mana ofii Ijaaratan – Ayyaantuu Online
HomeAfaan OromooGeesse Yaroon Ishee Yaroon Mana ofii Ijaaratan
Damee Boruu: Sadaasa 4, 2020
Jireenyi ofii keessatti ayyaanni nama ceesisu takkaa argama. Yoo guyyaan sun nama darbee umurii ofii keessatti deebi’anii argachuunhin danda’amu taha. Yaa Uummata Oromoo guyyaan manaa keenya ijaaranuu gesse. Humnaa fi dandeetti qabnuun mana keenya Oromiyaa hatattamaan ijaaruun haa dursu. Diina keenya aangomsuuf jennee waan waraana nu hin ilaalle keessa gallee waan gubannuuf sababni tokko hin jiru. Yoo loluun barbaachisa tahe bilisummaa Saba Oromoof lolla. Lolla sodaachaa hin jiru. Lola haqaaf aarsaa tahuun seenaa qaba. Lola haqa hin qabneef qawwee baachuun lama du’uu dha. Tokko fooniin du’uu yoo tahu inni lammaffaa seenaan du’uu dha.
Gaafa 11/01/2020 “Shanee fi TPLF” uummata Ahaaraa fixan jedhamee kan labsamee kunoo diraamaa Kononeel Abiyi akka tahe ifatti argarre. Waan qindeefate sababni gugguddaan keessa Uummatni Ahmaaraa lola isaa Tigray irratti banuuf deemu akka isa gargaaruuf. Inni lammaafffaa Uummatni Amhaaraa Uummata Oromoo irratti jibbinsa caalu akka horatee yaroo tokkoti Uummata Oromoo fi Tigray fixxuu irratti akka isaa gargaaran gochuuf. Diraamaan isaa amma tokko isaaf hojjechaa jira. Midiyaa warra Habashaa kan akka ESAT fi 360 diraamaan kun utuu dhugaa tahuu isaa adda hin baafnee diinni isaanii inni duraa OROMUMMA akka tahe labsaa turan. Utuu akka hawwii isaanii tahe TPLF duraa Oromummaatu baduu qaba.
Kan isaaniif hin galle garuu Oromummaa kana balleessun akka hin danda’amne dha. Oromummaan saboonummaa Uummata Oromoo waan taheef yoo Sabni Oromoo bade malee baduu hin danda’u. Dubbiin akka dubartoonni isaanii mana marreeisaanii seeraan alaa keessatti waan gaddan fakkeessanii sobanii boo’aa Uummata Oromoo fi Tigray irratti lola kadhatanii miti. Waan kadhatan argatan. Kononeel Abiyi waraana TPLF irratti labseef. Mee kana booda eegaa galanii rafanii haa bulan. Lolli jalqabuu malee eenyu akka injifannoon galu Waaqa qofatu beeka.Kan Oromiyaa erga labsamee waggaa lama darbee jira. Dubartoonni boo’aan kun eessa akka jiraniifi maal akkadhagaa’aa jiraatan hin beeku. Mana maree keessa taa’anii J. Birahnuu Juulaa “Shanee torbaan lama keesattiin morma qabee fida” isa jedhu yoo hin dhageenye tahee mana maree sana keessa rafuuf qopha deemuu jechuu dha. Yaroo wareeranii kan immoo ni boo’u.
Ilmaan Oromoo bara baraan Mootota Habashaaf dhiiga isaanii lolaasanii jiru. Mootummaa Haayile Silaasee tiksuuf lola Mootummaa Somaalee fi Eritrea keessatti waadamaa ture Oromoo dha. Bara Dargii waraana Somalee lammaffaa, EPLF, TPLF fi OLF loluu kan rasaasa isa dura fudhatu Oromoo dha. Bara EPRDF fi Eritrean wal lolan fanjii irraa akka jaldeessaa deemee kan karaa bannuu Oromoo dha. Ilmaan Oromoo bara baraan maaliif waraana dantaa Mootummaa Habashaa eegu keessatti hirmaatanii dhumu jennee of gaafachuu qabna. Hojiin salphaan ilmaan Oromoo argatan humna waraana keessa seenuu qofa. Erga humna waraana keessa seenanii bakka ergaman deemanii du’uunis dirqama. Inni lammaffaa yoo lola sana keessa qooda fudhachuu hin barbaanne illee maal akka gochuu danda’an hin beekan. Gara itti baqatanii jalaa bahan hin qaban. Karaa duuba Mootumichi isaan ajjeessa. Karaa duraa diinni Mootumichaaf adda isaanii saaxilanii jiru. Diina lamaan jidduu waan jiraniif hixxaan isaanii du’a qofa.
Kanaafuu lola dirqii kana keessa seenan ibidaan gubachaa achi buuteen isaanii bada.Namas tahee seenaan isaan yaadtu hin jiru. Karaa biraa warra dammaqee Mootota Habashaa irratti fincilee haqa Uummata Oromoof aarsaa tahe kan akka Jeneral Taadasaa Birruu fi Kap. Maamoo Mazamir uummatni isaanii ammam akka isaan jaalatuu fi yaadatu ilaaluun fakkeenya gaarii dha. Warri kun hin duune inni wareegaman maalee. Kan du’e warra utuu waraana diinaaf lolu achi buuteen isaanii bade qofa.
Har’a WBOn utuu jiru dhala Oromoo tahee namni qawwee baatu waaraana Habashaaf dhaqee yoo du’e cubbuu dha. Ilmaan Oromoo qawwee diinaa baatan hunduu Uummata Oromoo keessa dhalatan. Abbaa haadha obboleessa, obboletti, adaadaa, eessuma, fira aantaa, abbootii Amantii, abbootii Gadaa fi mangudoon biyyaa isaan beeknu jirra. Ijoollee keenya fi obbolaa keenya gorsuu qabna. Dhalli Oromoo Mootummaa nafxanyaaf tiksuuf jedhee waraanaa Tigray keessa seenuuf haqa hin qabu. Uummatni Tigray biyya isaa keessa nagaan akka ofii isaa barbaadutti jiraachuun haqa isaa ti. Warri an akkaan barbaadetti malee jedhu haqa hin qabu.Mootummaa Kononeel Abiyi yoo mootummaa dha jetanii wajjin dhaabbatan boru Tigray cabsuuf yoo ayyaana argate iftaan Oromiyaa dhabamsiisu irratti fuula isaa deebisa.
Sabaa fi sab-lammiin Impaayeera Itoophiyaa keessa jiraniif Waraanni nafxanyootaa kun Tigray keessatti rukkutamuun nageenya isaaniif wabii dha. Karaa danda’ame maraa akka gufatu gochuu dha. Waraana of tuultota nafxanyaan hoogganamu kana bifa kamiin iyyuu gargaaruun carraa jiraachuu ofii balleessuu dha. Warri humna waraana adda addaa keessaa jiran meeshaa waraana isaan harka jiruu fi kan fudhachuu danda’an maraa saamanii gara saba isaanii geessuuf dirqama qabu. Lola kana keessaa lobuu keenyaa fi kan uummata keenyaa bararuu qabna
Sabni hunduu qophaa’ee of tuultota nafxanyaa kana of irraa tiksuun barbaachisaa dha. Waraanni isaan gochaa jiran seeraa mootummaa federaala keessaa keeyata 39(article 39) balleesanii Mootummaa Minilki isa saba hundaa ukkamsu deebifachuuf. Sabaa fi sablammiif immoo keeyatni 39 jiraachuu fi jiraachuu dhabuu dha. Jiraachuu waan barbaannuuf sabni hunduu kan hiree isaa ofiin murteefachuu fi mataa isaan of bulchuu barbaadu tokkummaan dhaabbatee humna nafxanyoota kana yaroo dhumaaf cabsuu qaba. Sabaa fi sab-lammiin olloota Oromiyaa jiran Uummaata Oromoo wajjin tahanii waraana nafxanyootaa kana adda duraan doomsuu qabu.
Hojiin Uummata Oromoo inni guddaan akka jeequmsi biyya Oromoo keessatti hin dhalanneef waan hunda dura Mootummaa Cehumsaa isaa ijaarate biyya tasgabeessuu dha. Ilmaan Oromoo mana hidhaa keessa jiran hatattamaan baasane akka Oromiyaa ijaaruu irratti qooda fudhatan gochuu qabna. Bakka isaanii warrii PP haa fudhatu.Sana booda jireenyi uummata akka hin boorofne nagaa waraan akka argamu gochu. Nageennya itti aansee, bishaan, ibsaan fi waan jireenya uummataaf barbaachisuu utuu adda hin citiin akka itti fufu gochuuirratti xiyyeefachuun barbaachisaa dha. Walii galla manni seeraa fi poolisaa dabalatee hojiin brookraasii akka itti fufu gochuun uummata yaaddoo jalaa baasa.
Karaa biraa kaadiree fi kaabinee PP uummata keessa haxxa’anii baasuun barbaachisaa dha. Keessattuu qabeenya uummataa saammanii jiran akka fudhatanii hin baannee fi dhiiga ilmaan Oromoo warri of harka qabu akka seeratti dhiyaatu gochuun filmaata hin qabu. WBO fi QBO humna ittisaa Oromiyaa isa akka sibilaa jabaatu ijaartan malee humni nafxanyoota dafee garaa kutatee Oromiyaa gad hin dhiisu. Yaroo kana rakkina guddaa kan isaanitti tahe Kononeel Abiyi waa’ee aangoo isaa malee waan biraaf dhima. Angoo isaaf immoo yaroof kan sodaachisaa tahee jiru akka hubannee isaati TPLF. Warra nafxanyootaaf garuu yaaddo guddaan Oromummaa waan taheef waan hunda dura baduu qabu. Wal darbuu isaanitu afuura nuuf kennaa jira.
Gadaan Gadaa Xumuraa Garbumaa Ti!